Fandrahonana sy fanararaotana Nidoboka am-ponja ilay lehilahy tsy mpandoa volan’ny mpivarotena
Lehilahy iray mpanimba ny entan’ny mpivarotena sy mpividy ireny mpampanofa tena maro ireny nefa tsy mpandoa vola no nidiran’ny mpitandro filaminana an-tsehatra ny fisamborana azy.
Araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena, arahin’ity tovolahy ity fandrahonana amin’ny zava-maranitra ny fanatanterahana ny asa ratsiny. Ny sabotsy tokony ho tamin’ny 10 ora maraina, nohenjehina olona maromaro teny amin’ny faritra Andohatapenaka io lehilahy io. Raha nahita izany ny polisy dia voatery nandray andraikitra nisambotra ity enjehin’ny mponina ity. Nentina teo anivon’ny kaomisarian’ny Boriborintany faha-7 eo 67 Ha izy hanaovana fanadihadiana, araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena.
Mpampanofa tena 4 niara-nitaraina
Tamin’io maraina io ihany dia vehivavy mpivarotena miisa efatra no tonga nametraka fitarainana mahakasika io lehilahy io noho izy tsy mety mandoa vola sady mandrahona amin’ny antsy, no mbola vakiany ny tranon’izy ireo ary alainy izay tiany ao. Fantatra ihany koa fa efa nifonja teny Tsiafahy ity lehilahy ity noho ny antony fitanana fitaovam-piadiana sy fikambanan-jiolahy. Niaiky ny fiampangana azy izy nandritra ny famotoran’ny polisim-pirenena ary fantatra fa nidoboka am-ponja eny Antanimora taorian’ny fandalovany teo anivon’ny fampanoavana omaly.